News under लेख
निश्पक्ष र सहि ढंगले सत्य घटनामा आधारित सूचनाहरु सञ्चार माध्यमबाट आम नागरिकमाझ जानकारी गराउने प्रक्रिया पत्रकारिता हो । पत्रकारिता आम नागरिकको सहि जानकारी लिने र दिने एक विश्वासिलो माध्यम हो । यस अर्थमा पत्रकारिता समाजको ऐनाको रुपमा चित्रित हुनुपर्दछ । विश्वासको आधार प्रतिविम्ब गर्ने क्षेत्र भएकाले पत्रकारिता पेसा अपनाउने पत्रकार...
एजेन्सी &ndash; चाणक्य नीतिका अनुसार नराम्रो बानी हुने व्यक्तिहरु कहिल्यै सफल हुँदैनन् । असल बानी र व्यवहारका कारण मानिसहरु सफल हुन्छन् । चाणक्यका अनुसार लक्ष्मी माताको आर्शिवाद प्राप्त गर्नका लागि लक्ष्मी देवीको पूजाआरधना गर्नुपर्छ । चाणक्यलाई देशकै सर्वश्रेष्ठ विद्वानका रुपमा चिनिन्छ । उनी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा सम्बद्ध थिए । उनी...
&nbsp;आगामी शुक्रबार हुने पहिलो मैत्रिपूर्ण खेलका लागि गत बिहीबार बंगलादेशको ढाका पुगेको नेपालीले टोलीले केही दिन यता बंगलादेशमा रहेर तयारी गरिरहेको हो । करिब नौ महिना पछि फुटबल खेल्न लागेको नेपाली टोलीले शुक्रबार पहिलो खेल खेल्दैछ । काठमाडौंमा एक साताको अभ्यासपछि थप एक साता बंगलादेशमा अभ्यास गर्ने योजना सहित नेपालबाट उडेको...
प्रधानमन्त्रीज्यू, मजदुरहरु एकछाक खानलाई खुल्ला मञ्चमा लामबद्ध भएर बसेको देख्दा च्वास्स मन पोल्छ होला हगि!
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू - रातो सलाम् मैले सम्मान गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट अगुवाहरुमध्ये तपाईको नाम पनि आउँछ। देश र जनताको परिवर्तनका निम्ति तपाईले गरेको सङ्घर्ष मैले जति नै बयान गरे पनि अपूरो हुन्छ र मेरो बशको कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्याग र बलिदानको कुरा सायद तपाई जति...
काठमाडौँ । नेपालका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपीएल) सिजन २०२० को खेलाडी ड्राफ्टमा रु एक करोड ५६ लाखमा अनुबन्धित भएका छन् । उन्नाइस वर्षीय लामिछानेलाई यस यामको सिपीएलका लागि जमैका तलावाजले गएराति एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो । जमैका तलावाजले उनलाई दोस्रो राउन्डमा छनोट...
By JANIE HAR, SAN FRANCISCO, April4(AP) &mdash; Since the beginning of an international pandemic, experts have known one population is particularly vulnerable to contracting and spreading the coronavirus: the homeless. California Gov. Gavin Newsom and other elected officials have vowed repeatedly to get them indoors. On Friday, News om...